WONDERFUL UNIVERSE: October 2008
The Cracked Pot (အက်ရာနဲ့ အိုးကလေး)တစ်ခါက ရေထမ်းသမား တစ်ဦးမှာ ရေအိုး နှစ်လုံးရှိသတဲ့။ ရေထမ်းသမားက အဲ့ဒီ ရေအိုး နှစ်လုံးကို ထမ်းပိုး တစ်ဘက်တစ်ချက် ဆီမှာ ချိတ်ဆွဲပြီး ရေထမ်းထွက်လေ့ ရှိတယ်။ ရေအိုး တစ်လုံးမှာ အက်ရာရှိနေပြီး ရေတွေ စိမ့်ကျ ကျန်နေရစ်ခဲ့လို့ အဲ့ဒီ အိုးကလေးက ဘယ်တော့မှ ရေအပြည့် သယ်မပေးနိုင်ရှာဘူး။ ကျန်တဲ့ အိုးတစ်လုံးကတော့ အပြစ် အနာအဆာ လုံးဝ ကင်းရှင်းနေတဲ့အတွက် ရေကို အိုးအပြည့် သယ်ပေးနိုင်တာပေါ့။အလွန်ဝေးတဲ့ ခရီး အတိုင်း ရေထမ်းသမား ရေထမ်းပြီး ပြန်လာတိုင်း အက်ရာနဲ့ အိုးကလေးထဲက ရေဟာ အိုး တစ်ဝက်လောက်ပဲ ကျန်နေခဲ့ပြီး ကျန်တဲ့ တစ်ဝက်က အမြဲ လမ်းမှာ ယိုစိမ့် ကျန်နေရစ်ခဲ့တယ်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာ ရေ တစ်ခေါက် သယ်တိုင်း အိုးနှစ်လုံးစာ အပြည့် ဘယ်တော့မှ မရဘဲ ရေ တစ်အိုးနဲ့ တစ်ဝက်စာပဲ အမြဲ ရတာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ရေထမ်းသမားက ရေ သယ်လာလိုက်တာ နှစ်နှစ်တောင် ကြာလို့ နေခဲ့ပြီ။ အကောင်းပကတိ အတိုင်း ရှိနေတဲ့ အိုးကတော့ အမြဲ ရေအပြည့် သယ်ပေးနိုင်တဲ့ အတွက် သူ့ရဲ့ အပြစ်ကင်းမှု အပေါ် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက် နေတယ်။ အက်ရာနဲ့ အိုးကလေး ခမျာမှာတော့ သူ့ရဲ့ အပြစ် အနာအဆာကြောင့် ရေထမ်းသမား ပင်ပန်းရကြိုး မနပ် ဖြစ်နေတာကို တွေးတွေးပြီး ရှက်လို့ မဆုံး၊ ၀မ်းနည်းလို့ မဆုံး ဖြစ်နေရတယ်။ ရေထမ်းသမားက ရေအပြည့် အမြဲ ဖြည့်ပြီး သယ်ခဲ့ပေမဲ့ သူက ရေကို တစ်ဝက်လောက်ပဲ အိမ်အရောက် သယ်ပေးနိုင်ခဲ့တာကိုး။အဲ့ဒီလို ခါးသီးတဲ့ ရှုံးနိမ့်မှု၊ သိမ်ငယ်မှုတွေကို နှစ်နှစ်လောက် ခါးစည်း ခံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တော့ အက်ရာနဲ့ အိုးကလေး ဟာ ဆက်ပြီး သည်းမခံ နိုင်တော့ဘူး။ တစ်နေ့တော့ မြစ်ဘေးနားမှာ ရေခပ် နေတဲ့ ရေထမ်းသမားကို ဖွင့်ပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော့်ရဲ့ အပြစ် အနာအဆာ အတွက် ခွင့်လွှတ် ပေးပါ ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော့်မှာ ရှိနေတဲ့ ဒီ အက်ရာ ကနေ ရေအမြဲ ယိုစိမ့်ပြီး ကျန်နေခဲ့လို့ သခင့်အတွက် ရေကို အပြည့် ဘယ်တော့မှ ကျွန်တော် သယ်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ချို့ယွင်းချက်ကြောင့် သခင့် လုပ်အားတွေ ဆုံးရှုံးရသလို ပိုပြီးတော့လဲ ပင်ပန်းနေရတယ်။တာဝန်ကို ကျေပွန်အောင် မထမ်းနိုင်တဲ့ ကျွန်တော့် အားနည်းချက်ကြောင့် သခင် ပင်ပန်းရကျိုး မနပ် ဖြစ်ရတာ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရသလို အဲ့ဒီအတွက်လဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရှက်လှပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီစကားကို ကြားတော့ ရေထမ်းသမားက အက်နေတဲ့ အိုးကလေး နားလည်အောင် အခုလို ရှင်းပြပါတယ်။မင်းရဲ့ တစ်ခြားဘက် အခြမ်းမှာ မရှိဘဲ မင်းဘက် အခြမ်းမှာပဲ ရှိနေတဲ့ ပန်းပင်တွေကို လမ်းတစ်လျှောက်မှာ သတိ မထားမိဘူးလား။ ငါက မင်းရဲ့ အားနည်းချက်ကို သိတယ်။ ဒါကြောင့် မင်းဘက်အခြမ်းမှာ ပန်းမျိုးစေ့တွေကို ကျဲပြီး စိုက်ခဲ့တယ်။ အိမ်အပြန် လမ်းတစ်လျှောက်လုံး မင်းဆီက ကျတဲ့ ရေတွေက အဲ့ဒီ ပန်းမျိုးစေ့တွေကို ရှင်သန်ကြီးထွား စေခဲ့တာပေါ့။ အခုဆို အဲ့ဒီ ပန်းပင်လေးတွေက အပွင့်တွေ ပွင့်ပေးလို့ ငါ့ အိမ်အပြန်မှာ သူတို့ကို ခူးခဲ့ပြီး ပန်းအိုး ထိုးလို့ ရနေပြီ။ မင်းရဲ့ အက်ရာသာ မရှိခဲ့ရင် ငါ့အိမ်ကို အခုလို ကျက်သရေရှိပြီး လှပနေအောင် ဘယ်လို အလှ ဆင်နိုင်မလဲ။ကျွန်တော်တို့ အားလုံးမှာ အားနည်းချက် ကိုယ်စီ ရှိကြပါတယ်။ အက်ရာနဲ့ အိုးကလေး လိုပဲပေါ့။ အဲ့ဒီ ချို့ယွင်းချက်၊ အားနည်းချက၊် အပြစ်အနာအဆာ တွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘ၀တွေကို အလွန်တရာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းအောင် ဖန်တီး ပေးသလို ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ ဆုလာဘ်တွေလဲ ဖြစ်တယ်။ ဘယ်လို လူစားမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့က ကောင်းကွက်လေးတွေကို မြင်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အဲ့ဒီ ချို့ယွင်းချက်၊ အားနည်းချက၊် အပြစ်အနာအဆာ တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် အသုံးချနိုင်အောင် တည့်ပေးလိုက်နိုင်ရင်တော့ ဒါတွေဟာ စိတ်ပျက် အားငယ်စရာတွေ မဟုတ်တော့ဘဲ ဘ၀ရဲ့ ကောင်းချီးပေးမှုတွေ ဖြစ်လာမှာပါ။သင့် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ အမျိုးမျိုးသော လူသားတိုင်းကို နားလည်စွာ ချီးမြှောက်ဖို့ သတိရပါ။ဘာသာပြန်သူ - မိုးကုတ်သား Posted by
Reactions: My Best Friend's Wedding (Event Announcement)
My Best Friend's Wedding (Event Announcement)Warmly invite to the Wedding Banquet ofHtin Kyaw Myint; the eldest son of U Myint Sein & Daw Myint Zu LattandYin Min Kyaw; the eldest daughter of U Kyaw Maung & Daw Nyo Nyo SeintDate :2November 2008, SundayTime : 7:30pm sharpVenue : Alumini Ballroom Level3Yunnan Garden Restaurent one-North, NTU Alumini Club # 03-01 11 Slim Barracks Rise (off N. Buona Vista Rd, via one-north Gateway) (next to MOE) Singapore 138664 Tel: (65) 6665888 Fax: (65) 6777 0606 R.S.V.PHtin Kyaw Myint : 97377359: 93383609Invitation CardMap GuideNTU Alumini Club
အသုံးဝင်မဲ့ AutoCAD shortcuts လေးတွေကို မျှဝေပေးထားပါတယ်။ မပြည့်စုံသေးတာတွေ ရှိရင် ထပ်မံ ဖြည့်စွက်ပေးကြပါခင်ဗျာ။ ALT+F8 VBA Run........ ALT+F11 VBA Editor CTRL+0 Clean screen....... CTRL+1 Properties Palette..............................CTRL+2 DesignCenter Palette........CTRL+3 Tool Palette............... CTRL+4 Sheet Set Manager Palette..............CTRL+5 Info Palette................ CTRL+6 DBConnect ManagerCTRL+7 Markup Set Manager Palette...... CTRL+8 Quick Calculator..... CTRL+9 Command Line................ CTRL+A Selects all objects in drawing....CTRL+B Toggles Snap....... CTRL+C Copies objects to Clipboard.....CTRL+SHFT+C Copies objects to Clipboard with Base Point....CTRL+D Toggles coordinate display...... CTRL+E Cycles through isometric planes....CTRL+F Toggles running object snaps...... CTRL+G Toggles Grid.......CTRL+H Toggles PICKSTYLE on/off............ CTRL+J Executes last command....CTRL+K Hyperlink....... CTRL+L Toggles Ortho mode..... CTRL+M (No action)...CTRL+N Createsanew drawing..... CTRL+O Opens existing drawing....... CTRL+P Prints current drawing..... CTRL+Q Exit..... CTRL+R Cycles layout viewports..... CTRL+S Saves current drawing...... CTRL+SHFT+S Saveas......CTRL+T Toggles Tablet mode......... CTRL+V Pastes data from Clipboard.....CTRL+SHFT+V Pastes data from Clipboard as Block...CTRL+X Cuts objects to Clipboard........ CTRL+Y Repeats last action...CTRL+Z Reverses last action.......... CTRL+[ Cancels current commandCTRL+\_ Cancels current command F1 Displays Help........F2 Toggles text window on/off..... F3 Toggles OSNAP.....F4 Toggles TABMODE........ F5 Toggles ISOPLANE......... F6 Toggles COORDSF7 Toggles GRIDMODE..... F8 Toggles ORTHO MODE........F9 Toggles SNAP MODEF10 Toggles POLAR....... F11 Toggles OTRACK 3A 3DARRAY........ 3DO 3DORBIT ....... 3DW 3DWALK...........3F 3DFACE3M 3DMOVE......... 3P 3DPOLY............. 3R 3DROTATEA ARC...... AC BACTION.............. ADC ADCENTER.... AA AREAAL ALIGN............ 3AL 3DALIGN............. AP APPLOAD.........AR ARRAY-AR -ARRAY............ ATI ATTIPEDIT................ ATT ATTDEF...........-ATT -ATTDEFATE ATTEDIT............-ATE -ATTEDIT....................ATTE -ATTEDITB BLOCK........ -B -BLOCK........... BC BCLOSE.......... BE BEDITBH HATCH............ BO BOUNDARY..........-BO -BOUNDARY............ BR BREAKBS BSAVE..........BVS BVSTATEC CIRCLE........ CAM CAMERA......... CH PROPERTIES............. -CH CHANGECHA CHAMFER.......... CHK CHECKSTANDARDS......... CLI COMMANDLINECOL COLOR.............. CO COPY............ CP COPY............ CT CTABLESTYLECYL CYLINDERD DIMSTYLE......... DAL DIMALIGNED.......... DAN DIMANGULARDAR DIMARC....... JOG DIMJOGGED........... DBA DIMBASELINEDBC DBCONNECT......... DC ADCENTER........ DCE DIMCENTERDCO DIMCONTINUE........DDA DIMDISASSOCIATE........... DDI DIMDIAMETERDED DIMEDIT.......... DI DIST... DIV DIVIDEDJL DIMJOGLINE............... DJO DIMJOGGED............ DL DATALINKDLI DIMLINEAR........... DLU DATALINKUPDATE............ DO DONUTDOR DIMORDINATE.......... DOV DIMOVERRIDE.......... DR DRAWORDERDRA DIMRADIUS.................. DRE DIMREASSOCIATEDRM DRAWINGRECOVERY............... DS DSETTINGS........... DST DIMSTYLEDT TEXT......... DV DVIEW................... DX DATAEXTRACTIONE ERASE............. ED DDEDIT...................EL ELLIPSEER EXTERNALREFERENCES............ EX EXTEND............ EXIT QUITEXP EXPORT............... EXT EXTRUDEF FILLET............... FI FILTERG GROUP............ -G -GROUP................ GD GRADIENTGR DDGRIPSH HATCH............. -H -HATCH............. HE HATCHEDIT.. HI HIDEI INSERT............... -I -INSERT.......... IAD IMAGEADJUSTIAT IMAGEATTACHICL IMAGECLIP......... IM IMAGE.............. -IM -IMAGEIMP IMPORT....... IN INTERSECT............... INF INTERFEREIO INSERTOBJJ JOINL LINE..................... LA LAYER.......... -LA -LAYERLAS LAYERSTATE.................... LE QLEADERLEN LENGTHEN.................... LI LIST............. LO -LAYOUTLS LIST................... LT LINETYPE.............-LT -LINETYPELTS LTSCALE............ LW LWEIGHTM MOVE............ MA MATCHPROP........... MAT MATERIALSME MEASURE.............. MI MIRROR.............ML MLINEMLA MLEADERALIGN.................. MLC MLEADERCOLLECTMLD MLEADER............ MLE MLEADEREDITMLS MLEADERSTYLE............. MO PROPERTIES............. MS MSPACEMSM MARKUP.............. MT MTEXT................. MV MVIEWO OFFSET.......... OP OPTIONS..........ORBIT 3DORBITOS OSNAP.......... -OS -OSNAPP PAN............... -P -PAN................. PA PASTESPECPE PEDIT....... PL PLINE..............PO POINTPOL POLYGON......... PR PROPERTIES............... PROPS PROPERTIESPRE PREVIEW......... PRINT PLOT.............. PS PSPACEPSOLID POLYSOLID.............. PTW PUBLISHTOWEBPU PURGE.................. -PU -PURGE............... PYR PYRAMIDQC QUICKCALC.............. QCUI QUICKCUIR REDRAW................. RA REDRAWALL.............. RC RENDERCROPRE REGEN........... REA REGENALL............ REC RECTANGREG REGION........ REN RENAME........... -REN -RENAMEREV REVOLVE............ RO ROTATE............... RP RENDERPRESETSRPR RPREF............ RR RENDER..............RW RENDERWINS STRETCH............... SC SCALE.............. SCR SCRIPTSE DSETTINGS.......... SEC SECTION............... SET SETVARSHA SHADEMODE................SL SLICE................SN SNAPSO SOLID................. SP SPELL....................... SPL SPLINESPLANE SECTIONPLANE................ SPE SPLINEDITSSM SHEETSET............. ST STYLE................ STA STANDARDSSU SUBTRACTT MTEXT.......... -T -MTEXT.................. TA TABLETTB TABLE............... TH THICKNESS............... TI TILEMODETO TOOLBAR............ TOL TOLERANCE...... TOR TORUSTP TOOLPALETTES.........TR TRIM.................... TS TABLESTYLEUC UCSMAN.......... UN UNITS........ -UN -UNITS........ UNI UNIONV VIEW...... -V -VIEW............ VP DDVPOINT-VP VPOINT........... VS VSCURRENT............ VSM VISUALSTYLES-VSM -VISUALSTYLESW WBLOCK........... -W -WBLOCK............. WE WEDGEX EXPLODE.......... XA XATTACH............. XB XBIND-XB -XBIND....... XC XCLIP............... XL XLINEXR XREF................... -XR -XREFZ ZOOMcaddmanager ထဲက အသုံးတဲ့မဲ့ shortcuts လေးတွေကို ပြန် မျှဝေပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ PDF file လိုချင်ရင် ဒီမှာဒေါင်းပါ ခင်ဗျာ။
ဟိုက်ရှားပါး။ ကောင်မလေး တစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ webcam ကို စမ်းသပ်ကြည့်ချင်လို့ ကူညီပေးပါ ဆိုထားပါလား။ ရုံး ရောက်ရောက်ချင်း e-mail စစ်တော့ တွေ့ရတဲ့ စာကြောင့် ကျွန်တော် တော်တော် ပျော်သွားတယ်။ ဒီ ကောင်မလေးကို online မှာပဲ ခင်နေတာ ကြာပြီ။ အခုတော့ webcam ကနေ တွေ့ခွင့် ရတော့မယ်။ ၀မ်းသာအားရနဲ့ သူပေးထားတဲ့ http://h1.ripaway.com/db5/privateCam-v0.1.exe ဆိုတဲ့ link လေးကို နှိပ်လိုက်တယ်။ အင်း ဒီကောင်မလေးကို မြင်ရင် ငါ ဘာတွေပြောရမလဲ။ ငါ့ရုံးမှာ webcam မရှိတာ နာတာပဲကွာ။ ခုတော့ ကောင်မလေးက ငါ့ကို မြင်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ အတွေးတွေနဲ့ လူပျိုကြီး ကျွန်တော် ရင်ခုန်လိုက်၊ အားမလို အားမရဖြစ်လိုက်။ ရှက်တာလိုလို၊ သဘော ကျတာလိုလို။ အလုပ် မစနိုင်သေးဘဲ အဲ့ဒီ exe ဖိုင်လေး run ပြီးသွားတော့ ကောင်မလေးကို တွေ့ရဖို့ အားကျိုးမာန်တက် စောင့်နေတယ်။အင်... ဘာမှလဲ မပေါ်လာပါလား။ မစူးစမ်း မဆင်ချင်ဘဲ ငမ်းချင်ဇော အဲလေ၊ ဟုတ်ပေါင်.. မြင်ချင်ဇောနဲ့ လုပ်လိုက်တာ မှားပြီထင်ပါ့။ မလုံမလဲနဲ့ ဘေးဘီဝဲယာကို ကြည့်တော့ ဧည့်ကြို ကောင်တာက ကောင်မလေးက ကျွန်တော့်ကို ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့် နဲ့။ အင်း ဒီကောင်မလေးလဲ လှသားပဲ။ သူးအကြည့်တွေက ကျွန်တော့်ကို တစ်ခုခု ပြောချင် နေသလိုလို။ ကျွန်တော့်ရင်တွေ ခုန်သွားပြန်တယ်။ ပြုံးပြလိုက်တော့ ကောင်မလေးက ဇဝေဇ၀ါ မျက်လုံးတွေနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်လို့။ ခဏနေတော့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေက ဟေ့ကောင် မင်းဘာတွေ ပို့နေတာလဲ မေးကြတယ်။ တစ်ယောက်မက၊ တော်တော်များများက မေးလာတော့ ဘာမှ မပို့တဲ့ ကျွန်တော် နဲနဲ အူလည်လည် ဖြစ်လာတယ်။ အဲ့ဒီ အချိန်မှာဘဲ ကျွန်တော့်သူဋ္ဌေးဆီက သတင်းတစ်ခု ၀င်လာပါတယ်။Waiting for you, view my private cam via secured connection http://h1.ripway.com/db9/privateCam_v0.1.exeဟင်၊ ဒီနောက်က link က ဒီမနက် ကျွန်တော် ဟိုကောင်မလေးဆီက ရတဲ့ link ပါလား။ နှိပ်ရ ကောင်းနိုးနိုး စဉ်းစားနေတုန်းHey what are you doing Please test my new webcam using private connection http://h1.ripway.com/db2/privateCam_v0.1.exe Hey Please help me to test my new cam http://h1.ripway.com/db5/privateCam_v0.1.exeသူဋ္ဌေးဆီက အဲ့ဒီလို ဆက်တိုက် ၀င်လာတဲ့ သတင်းကြောင့် စိတ်ရှုပ်လာပါတယ်။ ဒီသူဋ္ဌေး ဘာအရူးထပြီး ထူးထူးဆန်းဆန်း သူ့ရဲ့ webcam ကို ဇွတ်ကြည့်ခိုင်းနေမှန်းမသိဘူး။ ဟောဗျာ။ ရုံးကလူတွေ အကုန်လုံးဆီကနေ အဲ့ဒီလို ဆင်ဆင် message တွေ ၀င်လာပါလား။ ကျွန်တော် သဘောပေါက်လိုက်ပြီ။ ဒါ ဗိုင်းရပ်စ်ပဲ။ ဒါ ကာယကံရှင်တောင် မသိလိုက်ပဲ ဒီအကောင် သူ့ဘာသာ လိုက်ပို့နေတာ။ အစောနက ဧည့်ကြို ကောင်တာက ကောင်မလေး ဘာကြောင့် ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့် လုပ်နေလဲဆိုတာ သဘောပေါက်ပြီ။ ဟိုက်၊ ဒါဆို သူဋ္ဌေး ဆီက ၀င်လာတဲ့ message တွေကလဲ ဒီကောင့်လက်ချက်ပဲပေါ့။အင်တာနက်ကနေ ပို့လာတဲ့ exe ဖိုင်ဆိုရင် ဘက်တော့မှ သွားမဖွင့်နဲ့။ အဲ့ဒီလို သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က သေချာ မှာထားဖူးတာကိုတောင် သတိမရနိုင်အောင် မွှန်မိတာ။ နောက်ဆို ဘယ်သူ့ဆီက လာလာ၊ exeဖိုင် ဆိုရင်တော့ ဝေးဝေးကရှောင်မှ။ အခု လောလောဆယ်တော့ တစ်ရုံးလုံး ဒီ webcam အကောင်ရဲ့ ဒဏ်ခံ နေရပြီ။ သူဋ္ဌေးက အစပေါ့။ ဟော... သူဋ္ဌေး သူ့ရုံးခန်းလေးထဲက ထွက်လာပြီး ကျွန်တော့်ဆီ တန်းတန်းမတ်မတ် လာနေတယ်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ် မင်းဆီက စလာတာမလား မေးလာရင်တော့ ခေါင်းညိတ် ၀န်ခံလိုက်ဖို့က လွဲပြီး ကျွန်တော် ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့။ ကဲ၊ မစူးစမ်း မဆင်ခြင်ဘဲ ငမ်းချင်လှတဲ့ကောင်၊ မင်းအပြစ် မင်း ခံပေအုံးတော့။ဒီနေ့ တစ်ရုံးလုံး အဲ့ဒီ exe ဒဏ် ခံလိုက်ရရှာတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အကြောင်း စဉ်းစားမီရင်း ရေးထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရုံးမှာ ITသမားလဲ မရှိသလို အဲ့ဒီ အကောင်ကို ဘယ်လို သတ်ရမယ်မှန်းလဲ မသိဘဲ ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်။ ကျွန်တော် ဆိုတဲ့ကောင်ကလဲ virus, trojan, spam, maleware ဆိုတာတွေကိုတောင် ဘာမှန်း ကွဲကွဲပြားပြား သိတာ မဟုတ်တော့ ဘယ်လို သတ်ရမယ် ဆိုတာ သိဖို့ဝေးရောပေါ့ဗျာ။ ဒီ exe ဒဏ်ကိုလဲ ဘယ်နှစ်ယောက် ခံလိုက်ရပြီလဲ မသိ။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာရှင်များ နည်းပေးလမ်းပြ ကူညီ ပေးကြပါဦးဗျာ။ အင်တာနက် သုံးစွဲသူတွေ အားလုံး အဲ့ဒီလို ဒုက္ခတွေက ကင်းရှင်းကြပါစေ။ဒါကတော့ ကျွန်တော့်ဆီ ၀င်လာတဲ့ e-mail တစ်ခုပါ။Gtalk ဖွင့်ဖွင့်ချင်းပဲဆိုသလို GM ဆီက Links တစ်ခုပို့လိုက်လို့ဖွင့်မိကြည့်လိုက်မိတယ်..အဲ့မှာ ကိုက်တော့တာပဲ..Links က private camera.exe ဖိုင်ကို Download လုပ်ဖို့ ပေးထားတဲ့ Linkလေ..ဘုမသိဘမသိနဲ့ Clip လိုက်တာ.. Desktop ပေါ်မှာ ကင်မရာပုံစံလေး Icon လာပေါ်တယ်.. နောက်တော့Gtalk ထဲမှာရှိသမျှ Buddy တွေကိုတစ်ယောက်ချင်းဆီဖွင့်ပြီးလိုက်ချက်နေပါရော..သူကိုယ့်သူတောင်မိတ်ဆက်လိုက်သေးတယ်... I am India lady, 23 year old,live in new deli.. u r asl pls..... etc.. ကိုယ်ကထိုင်ကြည့်နေရုံနဲ့ ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး.. ဖွင့်ထားသမျှတွေကိုလည်း Minimize လုပ်လိုက်သေးတယ်..ခဏနေတော့ ရပ်သွားတယ်.. ကိုယ်ကတော့ ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်ထင်တာပေါ့..ဘယ်ဟုတ်မလဲ.. ငနဲသားက စက်ထဲမှာရှိသမျှ Folder တွေထဲကိုဝင် New Folderတွေဖွင့်ပြီး မူရင်းရှိတဲ့ Folder Name ကိုယူသုံးပြီး နောက်က .exe ကိုထည့်ထားလိုက်တာများ.. PC တစ်ခုလုံးမှာရှိသမျှ Folder တွေထဲမှာအများကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့.. ဒီနေ့တော့ ဘာမှလုပ်လို့ကိုမရတော့ဘူး... :( :( :( ပြီးတော့ ရှိသေးတယ်.. အဲ့ဒီကောင်က Task Manager ကိုပိတ်ထားတယ်.. ITDepartment ကလူတွေလည်း ရူးသွားကြတယ်... သူတို့မှာလည်း သူတို့ Server ထဲဝင်ဒုခပေးမှာစိုးလို့လေ.. လုပ်ကြပါဦး... သိတဲ့သူများရှိရင်..အဲ့ဒီအကောင်ကို ဘယ်လိုသတ်ရမလဲ... Kaspersky တော့မသတ်နိုင်တာသေချာတယ်...PC မှာ Anti-Virus က Kaspersky တင်ထားတယ်.. Manual Update လုပ်တယ်..ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုမှ မသတ်နိုင်ဘူးထင်တယ်... အခုတော့ ငြိမ်နေတယ်..သူငြိမ်နေရင် အလုပ်တွေအကုန်လုံး ပုံမှန်လေးလုပ်လို့ရနေတယ်.. တစ်ခါတစ်ခါသူဖောက်လာရင် သရဲခြောက်သလိုပဲ.. လုပ်ကြပါဦး....ဒါကတော့ ကျွန်တော့် e-mail ထဲ ရောက်လာတဲ့ forward mail တစ်ခုပါ။ အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်။1. Open Notepad.2. Copy following commands showed in red color and paste them into Notepad. taskkill /F /IM chrome.exetaskkill /F /IM privateCam_v0.1.exeattrib -S -H -R C:\_windows\_system32\_chrome.exedel C:\_windows\_system32\_chrome.exeREG Delete HKCU\_Software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Policies\_System /v DisableRegistryTools /fREG Delete HKCU\_Software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Policies\_System /v DisableTaskMgr /fREG Delete HKCU\_Software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Policies\_Explorer /v NofolderOptions /fREG Delete HKCU\_Software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Run /v "Yahoo Messengger" /fREG Delete HKCU\_Software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Run /v "Yahoo! pager" /fgpupdate 3. Choose Save as type: as All File (*.*) and name file as Kill-Chrome.bat or Kill-Chrome.exe and save it. (This .exe or .bat file is an executable file that can run above (red lines) one atatime)4. Disabled your Antivirus program if you have installed one. 5. If you are using Windows Vista, Right click on the Kill-Chrome.exe or Kill-Chrome.bat file and click Run as administrator to run. For Windows XP user, double click the file to run it. 6. Search and Delete the file name: privateCam_v0.1.exe in your computer.7. Restart your computer.Credit: PP Shein from Planet!
မူးယစ် ညခေါင်းတွေက မူးဝေ အုံခဲလို့။ မျက်လုံးတွေက အရာရာ ၀ိုးတစ်ဝါး။ ငါ တော်တော်များ မူးသွားပလား။ ဘယ်နားမှာ သောက်ခဲ့လို့ ဘယ်လို မူးနေမှန်း ကျွန်တော် မမှတ်မိတော့။ ကျွန်တော် သိနေတာက အိမ်ကို ပြန်နေတယ်။ ဈေးကြီးကို ဖြတ်ပြီး နန်းမွန်းကျောင်းရှေ့က တောင်တက်လမ်းလေး အတိုင်း တက်လာခဲ့တယ်။ ရွာလည်လမ်း အ၀င်က သရဲ ခြောက်တယ်လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ ညောင်ပင်ကြီးကိုတောင် ရှိသေးလား သတိ မထားမိဘဲ ဖြတ်လာခဲ့တယ်။ စည်ပင်သာယာ အောက်လမ်းအတိုင်း ဆင်းလျှောက်လာရင်း ကျွန်တော် ကြိတ်ပိုးနေတဲ့ မမတို့ အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ခိုးကြည့်ခဲ့သေးတယ်။ ဘာလို့များ လမ်းပေါ်မှာ လူဒီလောက် ရှင်းနေတာပါလိမ့်။ မူးရူး ယိုင်ထိုးပြီး အမြဲပြန်လာတတ်တဲ့ ကျွန်တော် ရန်ရှာမှာ ကြောက်လို့ တစ်ရွာလုံး ပုန်းနေကြသလား။ အဟက်။ ကျွန်တော်က ဒီလောက်တောင် ရွံစရာ၊ ကြောက်စရာ ကောင်းနေပြီ ထင်ပါ့။ ဟို ယိမ်း ဒီယိုင်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မနဲ သယ်လျှောက်ရင်း အိမ်ပေါက်ဝကို ရောက်လာတယ်။ အမယ်၊ အငယ်ကောင်က ဂစ်တာတီးပြီး အမေသီချင်း ဆိုလို့ပါလား။ ငါများ နားကြားလွဲ လေသလား။ ခြံတံခါးကို တွန်းဖွင့် ၀င်သွားတော့ ခြံအ၀င်ဝက သနပ်ခါးပင် ဘေးမှာထိုင်ပြီး ဂစ်တာတီး သီချင်းဆိုနေတဲ့ အငယ်ကောင်ကိုတွေ့တယ်။ ငါ သိပ်မမူးသေးပါဘူး။ အတွေးနဲ့ ကျေနပ်တုန်း အိမ်နောက်ဖေးမှာ အလတ်ကောင်ကို လှမ်းမြင်လိုက်တယ်။ အမယ်၊ ဒီကောင်ကလဲ အငယ်ကောင် ဆိုနေတဲ့ အမေသီချင်းကို တစ်ပိုင်းတစ်စ လိုက်ဆိုနေလိုက်တာများ စိတ်ပါလက်ပါ ရှိလို့။ သွားစမ်းပါ။ ဒီကောင်တွေက အခုမှ အမေ့ကို ချစ်ပြနေလိုက်တာ။ စိတ်ထဲ ဒေါသက ထောင်းကနဲ ထွက်လာတယ်။ ဘာကို အလို မကျဖြစ်နေမှန်း မသိဘဲ စိတ်တွေတိုနေတယ်။ အိမ်တံခါးကို ဆောင့်တွန်းပြီး ၀င်သွားတော့ လန့်သွားတဲ့ ညီမလေးက မ၀ံ့မရဲနဲ့ အခန်းထောင့်ကနေ ကြည့်တယ်။ သောက်လာပြန်ပြီ ဆိုတဲ့ ပုံမျိုးနဲ့ ခေါင်းယမ်းပြီး စိတ်ပျက်လက်ပျက် ကြည့်နေတဲ့ ညီမလေးကို မျက်လုံးထောင့်ကနေ မြင်ဖြစ်အောင် မြင်လိုက်သေးတယ်။ အောင်မာ၊ ဒင်းကများလာသေးတယ်။ ဒေါသတွေ ပိုထွက်လာပေမဲ့ မူးနေတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မသယ်နိုင်တော့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ညီအကို လေးယောက် စုပေါင်းပြီး တိုးခွေ့ အိပ်ရတဲ့ ကုတင်ပေါ် ပစ်လှဲ ချလိုက်ရတယ်။ထမင်းဟင်း ချက်နေတဲ့ အမေကလဲ ကျွန်တော် မူးလာတာကို စိတ်တိုနေပုံ ရတယ်။ ဆောင့်ဆောင့် အောင့်အောင့် လုပ်နေတယ်။ ဘာဖြစ်လဲကွာ။ ကိုယ့် ပိုက်ဆံနဲ့ ကိုယ် သောက်လာတာ ဘယ်သူ့ ဂရုစိုက်ရမှာလဲ။ အရက်လေး သောက်တာများ မဟာ ပြစ်မှုကြီး ကျူးလွန်ထားတာ ကျနေတာပဲ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုမစိုက်ဘူး။ စိတ်ချဉ်ချဉ်နဲ့ အိပ်ပစ်လိုက်တာပဲ ကောင်းတယ်။ ကျွတ်၊ ခေါင်းကလဲ မူးရုံမက ကိုက်လာသလိုပဲ။ ဒေါသတွေက ပိုပြီး ဆူဝေလာတယ်။ထမင်းစားဖို့ လာခေါ်တဲ့ ညီမလေးကို ခြေနဲ့ လှမ်းခတ် ပြစ်လိုက်တယ်။ သွားစမ်းကွာ။ ရှာသမျှ ဒီလောက် ပေးနေတာတောင် မစိုပြေနိုင်တဲ့ ထမင်းဝိုင်း၊ ငါ မစားဘူး။ ကျွန်တော် ကန်လိုက်လို့ ညီမလေးလဲ ကြိတ်ငိုနေတယ်။ သူလန့်ြ့ပီး အော်လိုက်တဲ့ အသံကို ကြားလို့ထင်ပါရဲ့။ အလတ်ကောင်နဲ့ အငယ်ကောင်က အိမ်ထဲ ပြေးဝင်လာတယ်။ညီမလေးကို ကန်လွှတ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ၀ိုင်းဆွဲကြတာပေါ့။ အလတ်ကောင်က ခြေရင်းကနေ ကျွန်တော့် ခြေထောက်ကို ချုပ်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ အငယ်ကောင်က ကုတင် ဟိုတစ်ဘက် ဘေးကနေ ကျွန်တော့်လက်တွေကို ချုပ်လို့ရအောင် ဆွဲနေတယ်။ အော်၊ မင်းတို့က ဒီလိုလား။ ဆူဝေချင်နေတဲ့ ဒေါသတွေ ပွက်ပွက်ထပြီး အတင်းရုန်းတယ်။ ရုန်းလို့ မရလေ ဒေါသတွေက ပိုထွက်လေ။ ဒီလောက်တောင်ရှိတာ၊ ကဲကွာ။ မျက်စိကို စုံမှိတ်၊ ရှိသမျှ အားကုန်သုံးပြီး ရုန်းရင်း ခြေစုံ ကန်ထည့်လိုက်တယ်။၀ုန်းကနဲ ကျွန်တော် ကျုံးရုံး လူးလဲပြီး ထထိုင်ရင်း ဒီကောင်တွေ ပြန်ချုပ်လာရင် အသင့် ပြန်ဆော်ဖို့ မျက်လုံးကို ပြူးပြဲပြီး ဖွင့်ကြည့်တော့ဟင်၊ ကျွန်တော့် အိမ်က ၀ါးထရံတွေ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး အုတ်နံရံ ဖြစ်နေရတာတုန်း။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့် ကုတင် ကလဲ ဘာလို့ သေးသွားရတာလဲ။ ဟိုတစ်ဘက်မှာကလဲ ကုတင်တစ်လုံး။ မှားယွင်းနေတဲ့ အခန်း အနေအထားကြောင့် ကျွန်တော့် ခေါင်းကို တော်တော် အလုပ်ပေး စဉ်းစားနေတုန်း ကျွန်တော့် ခုတင်ခြေရင်းကနေ ကုန်းကုန်းကွကွနဲ့ ထလာတဲ့ သူကိုမြင်မှ ဩော် ငါအိပ်မက် မက်နေပါလား သိတော့တယ်။အိပ်မက် မက်ပြီး ၀ူးဝူးဝါးဝါး ရုန်းကန် အော်ဟစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို လာနိုးရင်း ကျွန်တော့် အခန်းဖော်ခမျာ ကျွန်တော့့်် ကန်ချက်ကို မိသွား ရရှာလေရဲ့။ ပျာပျာသလဲ တောင်းပန်ရင်း သက်ပြင်းကို ၀ူးခနဲနေအောင် ချလိုက် ရတယ်။ တော်ပါသေးရဲ့။ အိပ်မက်ထဲမှာ အဖေနဲ့ ညီအငယ်ဆုံးက ပါမလာသေးလို့။ နို့မို့ဆို သားအဖတွေ ၀ိုင်းပြီး ဘေ ကြတာနဲ့ အိပ်ယာကတောင် မနိုးနိုင်ဘဲ ကိစ္စ ချောမဲ့ပုံ။ဆက်အိပ် မရတော့တာနဲ့ ဘာကြောင့် ဒီအိပ်မက်ကို မက်လဲ စဉ်းစားကြည့်တော့ အဖြေ မတွေ့ဘူး။ ခေါင်းတွေလဲ တစ်ကယ်ကို ကိုက်နေတာ။ ကျွန်တော်လဲ တစ်ခါမှ အိမ်ကို မူးရူးပြီး မပြန်ဘူးပါဘူး။ နောက်ပြီး အိပ်မက်ထဲက အိမ်ကလဲ ကျွန်တော် ဆယ်တန်းနှစ်ထိဘဲ နေခဲ့တဲ့ နေရာ။ အဲ့ဒီ အိမ်ကနေ ပြောင်းပြီး သုံးဆယ့်တစ်ဘုံ ထိပ်မှာ သွားနေတာ ကြာလှပေါ့။ သုံးဆယ့်တစ်ဘုံထိပ် ဆိုလို့ တစ်မျိုးတော့ မထင်ပါနဲ့ဗျာ။ လှေကားပေါင်း သုံးဆယ့် တစ်ထစ်ကို တက်ပြီးမှ အိမ်ဝင်းထဲကို ရောက်လို့ပါ။ အဟား။အဲ့ဒီ အိမ်ဟောင်းလေးကို အိပ်မက်တိုင်း အမြဲ မွန်းမွန်းကျပ်ကျပ်နဲ့ ပူလောင်ခံစားရတာ များတယ်။ စိတ္တဇ တစ်ခုပဲ နေမှာပါ။ ဘယ်လောက်ပဲ ခါးသီးတဲ့ ဘ၀ကို ကြုံခဲ့ ပါစေ။ ကျွန်တော့် ခလေးဘ၀ ရှိခဲ့ရာ အဲ့ဒီ အိမ်ကလေးကို တော့ ကျွန်တော် ချစ်ပါတယ်။အင်း၊ အိပ်မက်ထဲ ကလိုများသာ မူးယစ်သောက်စားနေရင်တော့ အဖေ၊ အမေနဲ့ ညီ ညီမအားလုံး ဘယ် လောက် တောင် စိတ်ဆင်းရဲကြရရှာမလဲ။ အတွေးနဲ့တင် ကျွန်တော် တော်တော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်လှပြီ။ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ မွန်းကျပ်လာတဲ့ လူနေမှုစနစ်မှာ ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်နဲ့ အလိုက်အလျားသင့် မနေတတ်တဲ့ ကျွန်တော်... ထွက်ပေါက်မဲ့လေတိုင်း အိမ်ကလေးနဲ့ မိသားစုကိုသာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီး လွမ်းနေရပေမဲ့ ဒီလိုကြီးတော့ အိပ်မက်ထဲတောင် မလွမ်းပါရစေနဲ့ဗျာ။
Reactions: Scene of Mogok (မိုးကုတ် ရှုခင်းများ)
Scene of Mogok (မိုးကုတ် ရှုခင်းများ)ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မြို့ကလေးကတော့ တစ်ချို့ နေရာ တော်တော်များများမှာ သူ့ အလှတွေကို ၀ါးမျို ဖျက်ဆီး ခံနေရပေမဲ့ တစ်ချို့နေရာ လေးတွေမှာတော့ အခုလို စိမ်းစို လန်းဆတ်လို့ နေဆဲ။သဘာဝကို မထိန်းသိမ်းဘဲ တောင်တွေကို ဖြိုလိုက်၊ မြေတွေကို တူးဆွထိုးဖွပြီး ပတ္တမြားတွေကို စုပ်ယူ စားသုံးလို့ ၀ပြီ ဆို ချိုင့်ခွက် ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ နေရာမှာ ကန်တွေ၊ အင်းတွေ ဖြစ်ပြီး ချန်ရစ်ခံခဲ့ရ။ အင်း ဒီနေရာလေးတွေလဲ ဦးပိုင် ဖက်စပ်တွေရဲ့ စုပ်ယူဝါးမျိုမှုကို ဘယ်အချိန် ခံလိုက်ရလေမလဲ။ကျွန်တော်လွမ်းတဲ့ ရွာ အ၀င် လမ်းလေးတွေဆောင်းနှင်းဝေေ၀ အောက်မှာ ဒီလို ငြိမ်းချမ်းလို့အနေစုတ်ပေမဲ့ စိမ်းစိုလန်းဆတ် အေးမြလို့ဒီလို လှပတဲ့ ကျေက်တောင်ကြီးတွေလဲအခုလို ဖြိုခွဲခံရမြိုကလေးရဲ့ လမ်းလေးတွေကတော့ အရင်လိုနွေးထွေးစွာ ဆီးကြိုလို့မြို့ကလေးရဲ့ သုဿာန် တစ်နေရာဒါတွေ အားလုံးဟာ သင်္ခါရတွေပါ လို့ ကွန်တော် ပြောထွက်နိုင်မတဲ့လားဗျာ
မလွမ်းခဲ့ပါဘူး၊အဲ့ဒီမူးယစ်မှုတွေကငါ့ကိုယ်ငါတောင် မသိတော့အောင်လောင်မြိုက်လို့......။အတွေးစတွေထဲ နစ်မျောပြီးလမ်းကို ငါကူးခဲ့တယ်၊ပြီးတော့ အဲ့ဒီ အတွေးစတွေကိုလမ်း ဟိုဘက်တစ်ခြမ်းမှာငါ... မေ့လို့သွားပြန်တယ်။ငါ ရွက်လွှင့်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ ....စီးကြောင်းတစ်ခုထဲမှာမျောပါနေတာငါ့ကိုယ်ငါ မသိလိုက် ပြန်ဘူး။ဩော်... ဘာလိုလိုနဲ့အိမ်အပြန်အတွက်ငါ ချန်ရစ်ခဲ့တဲ့ခြေရာတွေတောင် ပျောက်ဆုံးခဲ့ပေါ့။(ဖေဖေ ပို့ပေးလိုက်တဲ့ ဆရာမဂျူးရဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးကို ဖတ်ပြီး ကျွန်တော် ဒီကဗျာလေး ရေးဖြစ်သွားပါတယ်)သားကြီးရေ-ဆရာမဂျူးကတော့ လက်ဖျား ခါလောက်အောင် စာရေး ကောင်းလှပါတယ်။ ဒီ Essay လေးကို ငါ့သား သဘောကျ နှစ်သက်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။သူ့ ဒဿနတွေက ဓမ္မအားလည်း ပါတယ်။လောကအားလည်း ပါတယ်။ ဒီလို ခွန်အားတွေ တိုးပွားဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ဖေဖေ Copy ပို့ပေးလိုက်တယ်။ ခွန်အားများ တိုးပွားပါစေ။ ဖေဖေထူး မိုးကုတ် 1st Oct; 2008ဖေ ပို့ပေးလိုက်တဲ့ ဆရာမဂျူး ရဲ. "တစ်ကြောင်းသွားလက်မှတ်" ဝတ္ထုတိုလေး အဆုံးက ခြေရာတစ်စုံကို တွေးမိရင်း ကျွန်တော့် ရှေ့က၊ နောက်က ခြေရာတွေကို ကြည့်မိတယ်။ ဘာခြေရာမှ ရှာမတွေ့ဘဲ ရေစီးကြောင်း တစ်ခုမှာ မျောနေတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မြင်မိတော့မှ ...... အပေါ်က ကဗျာမဟုတ်၊ စာမဟုတ် အပိုင်းအစလေး တစ်ခု ရင်ဘတ်ထဲက ထွက်ကျလာတယ်။မိတ်ဆွေတို့လဲ တစ်ခုခု ရသွားမယ် ဆိုရင်တော့....တစ်ကြောင်းသွား လက်မှတ် (ဂျူး)ငယ်တုန်းက စီးဆင်းနေသော ရေတွေကို ကျွန်မ သနားခဲ့ ဖူးပါသည်။ ဆည်မြောင်းကနေ ရေလွှတ်သည့် နေ့တစ်နေ့က ကျွန်မတို့ အိမ်ရှေ့က မြောင်းထဲမှာ ဒူးဆစ်ထိ နက်အောင် ရေတွေ အရှိန်ဖြင့် စီးဆင်းနေခဲ့သည်။ ကျွန်မက အိမ်ရှေ့မြောင်းကူး ၀ါးတံတားတိုလေး ပေါ်မှာ ရေစီးကို မျက်နှာချင်းဆိုင်လျှက် ခြေတွဲလောင်းချ ထိုင် လိုက်သည်။ အရှိန်ဖြင့် ပြေးစီး လာနေသော ရေထဲသို့ ခြေထောက်ကို နှစ်လိုက်သည်။ ခြေထောက်ကို တိုးဝှေ့ ဖြတ်စီးသွားသော ရေ၏ အေးစိမ့်သော၊ တွန်းတိုက်သော အတွေ့ကို ကျွန်မ ချစ်သည်။ အဲသည် ရေတွေက အရှေ့တောင် ဘက်ကနေ လာပြီး အနောက် မြောက်ဘက်သို့ မြောင်းအတိုင်း စီးဆင်းသွားမည်ဟု ကျွန်မ သိသည်။ ကျွန်မနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်မှ စီးလာနေပြီး ကျွန်မ၏ နောက်ကျောဘက်မှ အဝေးကြီးအထိ စီးသွားမည်။ အဲသည် ရေတွေက တစ်ခါ စီးဆင်းပြီးလျှင် ပြန်လှည့်လာသည့် ထုံးစံမရှိ။ အသွား တစ်ကြောင်းပါပဲ။ အပြန်မရှိ။ ပြန် မလာတော့မည့် ရေတွေကို နောက်ပြန်လှည့်ပြီး ငေးမောနေမိခဲ့သည်။ ပြန်လမ်း မရှိသည့် ရေတွေဟာ ဝမ်းမနည်းကြဘူးလား။ လူတွေက ဘယ်နေရာ ရောက်ရောက် မိမိအိမ်ကို မိမိ အမြဲ ပြန်လာကြသည်။ ရေတွေက သူ့အိမ်သူ ပြန်မလာနိုင်ကြဘူးလား။ တွေးမိလျှင် ကျွန်မ ရေတွေကို သနားသွားသည်။ငါးတန်းအောင်လို့ ကုန်းဇောင်းကနေ ပြန်ပြောင်းခါနီးတော့ ကျွန်မ ခင်လက်စ သူငယ်ချင်း တွေနှင့် ခွဲရမှာမို့ ဝမ်းနဲသော်လည်း ကျွန်မ၏ ငယ်ဘဝ ရှိခဲ့ရာ ရေနံချောင်းကို လွမ်းနှင့် နေပြီး သားမို့ မြေကိုတော့ ခွာနိုင်ပါသည် ဟု ထင်ခဲ့သည်။ သွားပါ။ ဖုန်တွေသည်လောက် ပေါသည့် မြေကြီး။ မလွမ်းပါဘူး။ မစားရလို့ ချဉ်သည့် စပျစ်သီးလို သဘောထားခဲ့သည်။ ကျွန်မတို့ အိမ်ကို အပြီး ရောင်းပစ်ခဲ့သည်မို့ ပြန်လှည့်လာစရာ မလိုတော့ပြီ။ သို့သော် ကျွန်မ၏ စာဖတ် သက်တမ်း အဦးဆုံး ဘဝက ကုန်းဇောင်းမှ စသည်။ မေမေက နွေ ကျောင်းပိတ်ရက်တွင် လက်လေးလုံးခန့် ထူသော ဓူဝံ၏ မာလာ စာအုပ်ကို ဖတ်ခိုင်းခဲ့ရာမှ ကျွန်မ စာဖတ်ခြင်းကို နှစ်သက် လာခဲ့သည်။ စာအုပ်တွေသည် ကျွန်မကို ဇာတိမြေ ရေနံချောင်းနှင့် ဝေးရာသို့ ခေါ်ဆောင် သွားလိမ့်မည်ဟု ကျွန်မ တစ်ခါမှ မထင်ခဲ့ဘူး။ စိတ်ကူးဖြင့်ပင် မှန်းဆ မကြည့်ခဲ့ဘူးပါ။ ကျွန်မ ဖတ်ခဲ့သည့် စာအုပ်တွေက ကျွန်မကို အဝေးဆုံး သမုဒ္ဒရာ တွေထိ စိတ်ကူးတွေ ဖြန့်ကျက်စေခဲ့သည်။ မေမေ စုဆောင်းထားသည့် ဓူဝံ၊ တက္ကသိုလ် ဖုန်းနိုင် စာအုပ်တွေ ကုန်တော့ ဘကြီး ဦးဖိုးဦးတို့ အိမ်သည် ကျွန်မကို စာအုပ်တွေဖြင့် ဆွဲဆောင် နိုင်ခဲ့သည်။ တစ်နေ့ မသွားရလျှင် မနေနိုင်။ ဗန်းမော်တင်အောင်၊ သာဓု၊ စိန်စိန်၊ ယုဝတီ ကြည်ဝေ၊ အဲသည်ကနေ ဂိုဂေါလ်၊ လီယိုတော်စတွိုင်း၊ ဂေါ်ကီ။ တကယ်တော့ စာအုပ်တွေသည် ကျွန်မကို မွေးဖွားကြီးပြင်းရာ အရပ်ဒေသတွေမှ ဟိုးအဝေးသို့ ပြန်လှည့် မကြည့် ခရီးနှင်နိုင်အောင် အာမခံ ပေးခဲ့သည့်ခရီးသွား လက်မှတ်တွေ ဖြစ်ခဲ့သည်။ကျွန်မ သွားရာလမ်း၏ ဟိုဘက်ဒီဘက်မှာ ခြံရံလျှက်ရှိသော ပန်းများသည် စံပယ်ပန်းကဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မြတ်လေးပန်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူက အားကျမှာလဲ။ အပြန်မှာ ဒီပန်းတွေကို ခူးလိုက်ဦးမည်ဟု စိတ်ကူးမိသော်လည်း ကျွန်မ သည်လမ်းကို ပြန်မလာတော့ဘူး ဆိုတာကို ကျွန်မမသိမီ ပန်းတွေက သိနေပုံရသည်။ အမွှေးပျံ့ဆုံးသော ရနံ့ဖြင့် ကျွန်မအား မြိုင်ဆိုင်စွာ လွမ်းမော စေခဲ့သည်။ အခုတော့ ကျွန်မနှင့်ပန်းတွေက ဝေးကွာသွားခဲ့ပါပြီ။ တစ်ခါတစ်ခါမှာ မြတ်လေးပန်းတို့၏ မွှေးရနံ့ကို တမ်းတ မိသော်လည်း တမ်းတမိရုံဖြင့် စိတ်ကို နှစ်သိမ့် နိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်မ ပြန်မလှည့် တော့ပါဘုး။ ဆုံးရှုံးမှုတိုင်းမှာ ရည်ရွယ်ချက် ပန်းတိုင် ရှိပါသည်။ မွှေးပျံ့သော ပန်းတွေကို မဝေးနိုင်လျှင် ကျွန်မ ကြယ်တာရာတွေဆီ မနီးနိုင်။နွေရာသီ တစ်ခုမှာ ရေကူးကန်ထဲတွင် အချိန်ကြာကြာ မေ့မေ့လျော့လျော့ ရေကူးနေလဲ့သော လူတစ်ယောက်၏ ကောင်းကင်ပေါ်မှ လေယာဉ်ပျံတစ်စင်း ဖြတ်သန်းသွားသည်။ သူ ရေငုတ်နေချိန် ဖြစ်လို့ လေယာဉ်သံကို မကြားလိုက်ဟု ပြောသည်။ တကယ်က ထိုလေယာဉ်သည် သူလိုက်ပါရမည့် လေယာဉ် ဖြစ်သည်။ တစ်ချို့က လက်မှတ် ၀ယ်ပြီးမှ မိမိ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြန်ပြင်တတ်သည်။ သူဘာကြောင့် ခရီးကို လိုက်ပါမသွားဘဲ ချန်ရစ်ခဲ့သလဲဟု သူကိုယ်တိုင်တောင် သိချင်မှ သိမည်။ ချန်ရစ်သူတွေမှာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။ ရကို နှစ်သက်ပျော်မွေ့လျှင် ကောင်းကင်ဆီ သွားဖို့မလို။ကြီးမားသော ထရပ်ကားတွေပေါ်မှာ သစ်လုံးတွေ လိုက်ပါလျက် ခရီး ထွက်ကြသည်။ သူတီု့သည် အသက်ကြီးရင့်သော်လည်း ရိုးစင်းသူများ ဖြစ်သည်။ လောကဓံကို သူတို့ ကြံ့ကြံ့ ခံနိုင်သည်။ သူတို့၏ ခံနိုင်ရည်ကြောင့်လည်း သူတို့သည် တောတောင်တွေဆီမှ ခွဲခွာပြီး စက်ပစ္စည်းပေါ်မှာ တုံးလုံးလဲလျက် လိုက်ပါလာရခြင်း ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ဖြောင့်တန်းသော လမ်းတွေကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့သည်။ ကွေ့ကောက်သော လမ်းတွေကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့သည်။ မြေညီလမ်းတွေကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့သည်။ တောင်ပေါ်လမ်းတွေကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့သည်။ ခဏကြာလျွှင် မြစ်ကူးတံတား တစ်ခုသို့ ရောင်ကြတော့မည်။ တစ်ခုသို့ ရောက်ကြတော့မည်။ သစ်လုံးတို့သည် ရက်ပိုင်းအတွင်း နောက်ထပ် စက်ပစ္စည်းနှင့် တွေ့ကြုံရဦးမည်။ သူတို့မသိ။ မသိတော့ ပူပင်သောက မရှိ။ သူတို့လာရာ မွေးရပ်မြေမှ အပျော်ခရီး ထွက်လာကြသလို တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပေသုံးထောင်အမြင့် ရိုးမတောင်တန်း အခြေသို့ ပြန်ရောက်ကြတော့ မလို။ တစ်ကယ်တော့ မြစ်ကို ကူးပြီးလျှင် သူတို့ ပြန်လာလို့ မရ။ မြစ်ဆိုသည်မှာ အသွားသာ ရှိပြီး နောက်မြီး သူတို့ မသိလို့ပါ။ သူတို့သည် သစ်ပင် ပြန် မဖြစ်နိုင်။ အကိုင်းအခက်တွေ ပြန်ပြီး မဝေစည်နိုင်။ အရင်ကလို ကမ္ဘာကြီးအား အစိမ်းရောင်တွေ မဝေမျှနိုင်။ သူတို့ကို တစ်ယောက်ယောက်က တစ်ကြောင်းသွား လက်မှတ်တွေ ထုတ်ပေးလိုက် ပြီးပြီ။ တစ်ခါတစ်ခါ မိမိကိုယ်တိုင် မသိလိုက်ဘဲ မိမိ ကံကြမ္မာကို တစ်ယောက်ယောက်က စီရင်ခြင်းကို ခံလိုက် ရတတ်သည်။ရာသီဥတု မှုန်မှိုင်းပြီး မန်ကျည်းပင်တွေတောင် ငိုက်နြည်းဆဲ ဖြစ်သည့် တစ်မနက်ခင်းမှာ မေမေက ကျွန်မကို အိပ်ယာက နှုးသည်။ ယ်တောင်တွေ မှာရမယ်တဲ့။ ယပ်တောင်တွေကို ကျွန်မတို့အိမ်မှာ အများကြီး မြင်ဘူးပါသည်။ ထရံကာအိမ်မို့ အိမ်ထရံကြားမှာ ယပ်တောင်တွေ ထိုးစိုက်ထားတာ ရှိသည်။ ယပ်တောင် မလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လိုတယ်။ လူတွေ အများကြီးကို ကမ်းဖို့။ ဆေးလိပ်လဲ မှာရမယ်။ ဆေးလိပ်နဲ့ ယပ်တောင် ကမ်းရမယ်။ အမေ ဆုံးသွားပြီ။ ပြောရင်း မေမေ ငိုပါသည်။ အမေကြီးသည် ပြန်လှည့် မလာနိုင်တော့သည့် ခရီး တစ်ခုကို ထွက်သွားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု မေမေက ပြောသည်။ ပြန်လှည့်လာလို့ မရသည့် ခရီး ဆိုတာကို အဲသည် အရွယ်မှာ ကျွန်မ စသင် သိလိုက်ရခြ်း ဖြစ်ပါသည်။ ငါသေရင် ညည်းတို့ကို အန္တရယ်ကင်းအောင် တမလွန်ကနေ စောင့်ရှောက်ပေးမည်ဟု အမေကြီးက ပြောသည်။ ခရီးတိုင်းမှာ ရည်ရွယ်ချက် ဂှိသည်။ ကောင်းကင်မှာ လ လုံးဝ မရှိဘူး။ ကျွန်တော်သေရင် လတစ်စင်း တည်ဆောက်ယူမည် ဟု ပြောသော လူတစ်ယောက်ကို ကျွန်မ တွေ့ဘူးသည်။တိတ်ဆိတ်ခြင်း ဟူသော ကဗျာ တစ်ပုဒ်ကို ကျွန်မ ဖတ်ခဲ့ဘူးသည်။ဘယ်သူမှ မရှိဘူး။ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း တိတ်ဆိတ်ခြင်းရဲ့ တယောသံနဲ့။ တိတ်ဆိတ်ခြင်းဟာ ညည်းတွားနေတဲ့ ကျောက်သလင်း မိုးစက်တွေပဲ။ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ အခါ အိပ်ခန်း တစ်ခုထဲမှာ ရှေ့ပြန်နောက်ပြန် တစ်ကိုယ်တည်း လျှောက်နေတဲ့ အရူးတစ်ယောက်ရဲ့ နှေးကွေးတဲ့ ခြေလှမ်းတွေကို ကြားနိုင်တယ်။ အဆုံးမရှိတဲ့ စန္ဒရားထဲမှာ ကျွန်တော့် လက်ချောင်းတွေ ပျောက်ဆုံး သွားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့် နှလုံးသားထဲက တစ္ဆေ စန္ဒရားတစ်လုံး။တိတ်ဆိတ်ခြင်း တိတ်တိတ်နေစမ်းပါ။ တိတ်ဆိတ်မှုဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ စကားသံကို နားထောင်နေတဲ့ အိန်ဂျယ်တစ်ပါးလို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်တယ်။ တိတ်ဆိတ်နေရင် နွေဦး သစ်ရွက်တွေ ကြွေတဲ့ အသံကို ကြားနိုင်တယ်။ ရေလှိုင်းတွေရဲ့ အသံ အနမ်းတွေရဲ့ အသံကို ကြားနိုင်တယ်။ကဗျာရှင်သည် တိတ်ဆိတ်ခြင်း၏ ကြောက်မက်ဖွယ် အခြား ဂုဏ်ရည်ကိုတော့ ချန်လှပ်ထားခဲ့သည်။ အချို့သော တိတ်ဆိတ်ခြင်းများတွင် ရက်စက်မှု တွဲလျက် ပါဝင်သည်။တိတ်ဆိတ်ခြင်းကို အဖော်ပြုသော မကောင်းတိုးရွားနျား ရှိသည်။ ပြစ်မှု တော်တော်များများသည် တိတ်ဆိတ်မှု အောက်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ ရသည်။တိတ်ဆိတ်မှုသည် တစ်ခါတစ်ခါ ပြန်လမ်းမရှိသော ခရီးကို မောင်းနှင်ပေးသည့် စက်ယာဉ်များ ဖြစ်သည်။ကျောက်သလင်းလို ကြည်လင်ပြီး ထွင်းဖောက်မြင်နိုင်သော မိုးရေစက်များထဲတွင်ကခေးမလေး တစ်ယောက် ထီးမပါဘဲ အပြေး လမ်းလျှောက်နေသည်။ကျွန်မမှာ ဆောင်းထားသော ထီးရှိသည်။ သူ့လက်ထဲမှာတော့ တန်းလန်း ဆွဲထားသည်က သူ့ ဖိနပ်တစ်ရံ။ ပြတ်ထွက်သွားသည့် ဖိနပ်လား။ သူ့တစ်ကိုယ်လုံး မိုးရေတွေ စိုရွှဲ နေသည်။ ကျွန်မ ငယ်ငယ်တုန်းက မိုးရေထဲမှာ ထီးမပါလျှင် သည်လိုပဲ အပြေး လမ်းလျှောက် ခဲ့ဘူးသည်။ကျွန်မ၏ ထီးကို သူ့အား ပေးလိုက်ရမလား၊ ခက်နေတာက သည်ထီးသည် မိတ်ဆွေ ဆစ်ယောက်က ကျွန်မ ဆောင်းဖို့ လက်ဆောင် ပေးထားသော ထီးဖြစ်သည်။ ကျွန်မ အခန်းမှာ ကျွန်မ ၀ယ်ထားသော နောက်ထပ် ထီးတစ်ချောင်း ရှိသည်။ သွားပြီး ယူပေးလျုက်ရမလား။ တွေးနေဆဲမှာပင် သူက ကျွန်မထက် ခပ်ဝေးဝေးသို့ ရောက်သွားသည်။ နောက်ပြန် လှည့်မကြည့်။ ကျွန်မကလဲ အသံပြုပြီး အော်ခေါ်လိုက်ဖို့ စဉ်းစားနေ ခဲ့သည်။ နောက်တော့ သူနဲ့ ကျွန်မ တစ်လမ်းဆီ ဖြစ်အွားတော့သည်။ကြယ်ရောင် အောက်မှာ အရာရာသည် မသေချာ မရေရာသလို ဖြစ်နေခဲ့ပေမယ့် တောင်ထိပါကိုတော့ ကျွန်မ ရောက်အောင် တက်ရမည်။ ကျောက်တောင်နံရံတွေက ကြမ်းတမ်း ခက်မာသော်လည်း ကြံ့ခိုင်သည်။ ကျွန်မ၏ လက်ဖ၀ါးတွေကို ပွန်းပဲ့ စေသော်လည်း လက်ဖြင့် ကုပ်ယူ အားပြုဖို့ ပြည့်စုံသော ကျောက်သားနံရံများ ဖြစ်သည်။ မြစ်တွေ တောင်ကျချောင်းတွေကို ကျွန်မ ကျော်လွန်ခဲ့ပြီ။ ပြည်နယ်ပေါင်း များစွာကို ကျွန်မ ချန်ရစ်ထားခဲ့ပြီ။ နှင်းတွေကို ကျွန်မ ချန်ရစ်ခဲ့ပြီ။ အလှပဆုံးသော ပန်းပွင့်တွေကို ချန်ရစ်ခဲ့ပြီ။ လိပ်ပြာတွေကို ချန်ရစ်ခဲ့ပြီ။ ကျွန်မ အထက်မှာ ကျွန်မကို ငုံ့ကြည့်နေသည့် ကြယ်တူရာတွေ။ ကြယ်တွေဆီသို့ ခရီးနှင်နေမိမှန်း မသိ လမ်းလျှောက် နေခဲ့မိတာ နှစ်ပေါင်း များစွာ ကြာခဲ့ပြီ။ အခုလည်း တောင်ထိပ်ကို ရောက်လျှင်တော့ ကြယ်တွေဆီ ပိုနီးမှာပဲ ဟု မျှော်လင့်ချက် ရှိနေဆဲ။ ကျွန်မဘေးမှာ မည်သည့်အဖော်မှ လိုက်ပါလာခြင်း မရှိ။ ကျွန်မ တစ်ယောက်တည်း။ကျွန်မနောက်မှာက မှုန်ပျပျ မြေပြင်မှ အစိမ်းရောင်တောင် မသမ်းနိုင်တော့သည့် ဖြူလွလွ သစ်ပင်များ။ ကျွန်မ ရှေ့မှာတော့ ခြေရာတစ်စုံ။ ဂျူး
Four Wives In Our Lives (ဘ၀ကြင်ယာဘက် မိန်းမ လေးယောက်)
ဘ၀ကြင်ယာဘက် မိန်းမ လေးယောက်ဟိုး ရှေးတုန်းက ဘုရင်ကြီး တစ်ပါးမှာ မိဘုရား လေးဦး ရှိသတဲ့။အားလုံးထဲမှာ အငယ်ဆုံး၊ အချောဆုံး မိဘုရားငယ်လေးကို ဘုရင်ကြီးက အချစ်ဆုံးပေါ့။ အကောင်းဆုံး၊ အလှဆုံး၊ တန်ဖိုး အကြီးဆုံး ဆိုတဲ့ အ၀တ်အစား မှန်သမျှကို ဆင်ပေးပြီး ဖူးဖူးမှုတ် ထားတာပေါ့။ဘုရင်ကြီးက သူ့ရဲ့ တတိယမိဘုရား ကိုလဲ တော်တော်ချစ်တယ်။ တိုင်းခန်းလှည့်လည်တိုင်း၊ တစ်ခြား တိုင်းပြည်တွေ အလည်အပတ် သွားတိုင်း အတူ ခေါ်သွားလေ့ ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘုရင်ကြီးက အဲ့ဒီ တတိယမိဘုရား သူ့ကို ထားရစ်ပြီး တစ်ခြား ထွက်သွားမှာကို အမြဲ စိုးရိမ် ကြောင့်ကျ နေရတယ်။ဘုရင်ကြီးက သူ့ရဲ့ ဒုတိယမိဘုရား ကိုလဲ ချစ်ရှာပါတယ်။ သူမက သူ့ရဲ့ ယုံကြည်မှုပဲ။ ဒုတိယမိဘုရားက ဘုရင်ကြီးကို ကြင်နာယုယ သလို နားလည်သည်းခံမှု အပြည့်နဲ့ ချစ်ရှာတယ်။ ဘုရင်ကြီး အခက်အခဲတွေ ကြုံတိုင်း ဒုတိယမိဘုရားကို အမြဲ ရင်ဖွင့် တိုင်ပင်လေ့ ရှိသလို ဒုတိယမိဘုရားကလည်း နှစ်သိမ့်အားပေးရင်း ဒုက္ခတွေကို အတူ ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်း ပေးတတ်တယ်။ဘုရင်ကြီးရဲ့ ပထမမိဘုရား ကတော့ ဘုရင်ကြီးအပေါ် အင်မတန်မှ သစ္စာရှိ သလို တိုင်းပြည်ရဲ့ ကြွယ်ဝ ချမ်းသာမှု၊ ငြိမ်းအေးသာယာမှုကို ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ပေးသူ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘုရင်ကြီးက ပထမမိဘုရားကို မချစ်ဘူး။ ပထမမိဘုရားက ဘုရင်ကြီးကို ဘယ်လောက် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ချစ်ချစ် ဘုရင်ကြီးက ဘယ်တော့မှ အသိအမှတ် ပြုလေ့ မရှိဘူး။တစ်ချိန်တော့ ဘုရင်ကြီးက အသဲအသန် နာမကျန်း ဖြစ်တယ်။ သူ့ဘ၀ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန် ရောက်ပြီ ဆိုတာ သိတော့ သူ့ဘ၀ရဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ နေ့တွေကို ပြန်သတိရတယ်။ ငါ့မှာ မိန်းမ လေးယောက်ရှိပေမဲ့ သေရင် ငါတစ်ယောက်ထဲ ပါလား လို့လဲ တွေးမိတယ်။ဒါနဲ့ သူအချစ်ဆုံး မိဘုရားငယ်လေးကို ခေါ်ပြီး မေးတယ်။မင်းကို ငါအချစ်ခဲ့ဆုံးပဲ။ ကောင်းပေ့၊ ညွန့်ပေ့ ဆိုတဲ့ အ၀တ်အစား၊ အသုံး အဆောင် မှန်သမျှ ငါဆင်ပေးပြီး စောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်။ အခုတော့ ငါ သေရတော့မယ်။ ငါသေတဲ့အခါ ငါနဲ့ လိုက်ခဲ့ပြီး အဖော်လုပ် ပေးနိုင်မလား မေးတော့ မိဘုရားငယ်လေးကလုံးဝ မလိုက်ပေးနိုင်ဘူး အဲ့ဒီလို ခပ်ပြတ်ပြတ် ပြောပြီး အဝေးကို ထွက်သွားခဲ့တယ်။ ဘုရင်ကြီး ခမျာ သူ့နှလုံးသားကို ဓားထက်ထက်နဲ့ အမွှန်းခံရသလို ခံစားရတာပေါ့။၀မ်းနည်းနေတဲ့ ဘုရင်ကြီးက သူ့ရဲ့ တတိယမိဘုရား ကို ခေါ်ပြီးမေးပြန်တယ်။ငါ့ဘ၀ တစ်ခုလုံးအတွက် မင်းကို ချစ်ခဲ့တယ်။ အခုလို ငါ သေရတော့မဲ့ အခါ ငါနဲ့ လိုက်ခဲ့ပြီး အဖော်လုပ် ပေးနိုင်မလား မလိုက်ပေးနိုင်ပါဘူး၊ ဘ၀က ပျော်စရာ ကောင်းတယ်။ ရှင် သေတဲ့အခါ ကျွန်မက နောက်တစ်ယောက် ထပ်ပြီး ယူမှာပေါ့အဲ့ဒီ အဖြေစကား ကြားရတော့ ဘုရင်ကြီး ခမျာ သူ့နှလုံးသားကို ရေထဲဆွဲနှစ် ခံရသလို အေးစက် ထုံကျင်နေအောင် ခံစားရရှာတယ်။ဒါနဲ့ ဘုရင်ကြီးလဲ ဒုတိယမိဘုရားကို ခေါ်ပြီးမေးပြန်တယ်။ငါ အကူအညီ လိုတဲ့ အခါတိုင်း မင်းက ငါ့အတွက် အမြဲ အဆင်သင့် ရှိပေးခဲ့တယ်။ အခုလို ငါ သေရတော့မဲ့ အခါ ငါနဲ့ လိုက်ခဲ့ပြီး အဖော်လုပ် ပေးနိုင်မလား ကျွန်မ စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒီတစ်ခုကို မကူညီနိုင်တာတော့ ခွင့်လွှတ်ပါ။ ရှင့်ရဲ့ ဈာပနကိုတော့ ကျွန်မ သေချာ လိုက်ပို့ပေးမှာပါ။ဒုတိယမိဘုရားရဲ့ အဖြေစကားက ကောင်းကင်ပေါ်က လျှပ်စစ်မိုးကြိုးသွား တစ်စင်းလို ဘုရင်ကြီးကို အထိ နာသွားစေပါတယ်။ ဘုရင်ကြီးရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ အားလုံး ပျက်စီးကုန်ပါပြီ။ သူ အင်မတန် ချစ်မြတ်နိုးလှတဲ့ သူတွေ အားလုံးက ဒီတစ်ခါမှာတော့ သူ့ ဆန္ဒကို ဘယ်သူမှ မဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ကြတော့ ပါဘူး။ရှင်ဘယ်ကို သွားသွား၊ ဘာပဲ ကြုံရကြုံရ၊ ရှင်နဲ့အတူ ကျွန်မ လိုက်ခဲ့မယ်။စိတ်ဓာတ်တွေကျပြီး ခေါင်း ငိုက်စိုက် ကျနေတဲ့ ဘုရင်ကြီး ဟာ ရုတ်တရက် ထွက်လာတဲ့ စကားသံကြောင့် ခေါင်းမော် ကြည့် လိုက်တော့ သူ့ရဲ့ ပထမမိဘုရား ဖြစ်လို့ နေတယ်။ သူမက ဘုရင်ကြီးရဲ့ ပစ်ပယ် ထားမှု တွေကြောင့် ညှိုးဖျော့ ပိန်လှီလို့ နေတယ်။ငါ့မှာ အခွင့်အရေးတွေ ရှိနေ ခဲ့တုန်းက မင်းကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် စောင့်ရှောက်ခဲ့ သင့်တယ်။ အင်မတန်မှ စိတ်သက်သာရာ ရသွားတဲ့ ဘုရင်ကြီးက အဲ့ဒီလို မချိတင်ကဲ ရေရွတ်လိုက် မိပါတယ်။ နောင်တတွေလဲ ရ လို့ပေါ့။အမှန်တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးရဲ့ ဘ၀မှာ ကြင်ယာဘက် မိန်းမ လေးယောက်စီ ရှိကြပါတယ်။စတုတ္ထမြောက် မိန်းမက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် နဲ့ တူပါတယ်။ အချိန်နဲ့ ငွေကြေးတွေ ဘယ်လောက်ပဲ အကုန်အကျ ခံပြီး ကြည့်ကောင်းအောင် ဘယ်လောက် ဂရုစိုက်စိုက်၊ ဒီ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက ကျွန်တော်တို့ သေဆုံးချိန်မှာ ထားရစ်ခဲ့ မှာပါဘဲ။တတိယမြောက် မိန်းမက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု၊ စည်းစိမ်နဲ့ ဂုဏ်ပကာသန ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သေဆုံးချိန်မှာ ဒါတွေအားလုံးဟာ သူတစ်ပါးရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒုတိယမြောက် မိန်းမက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိသားစု၊ ဆွေမျိုး အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေပေါ့။ ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာမှာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်လိုအပ်ချိန်မှာ အတူရှိနေ ပေးနိုင်ပေမဲ့ ဒါဟာ ကိုယ် သင်္ချိုင်းမြေပေါ် ခြေမချခင် အချိန် အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိဘဲ ဖြစ်နိုင်ပါ လိမ့်မယ်။ပထမ မိန်းမကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ဝိဥာဉ် ပါပဲ။ လောကကြီးမှာ ငွေကြေး စည်းစိမ်ဥစ္စာ၊ အာဏာနဲ့ ပျော်ရွှင်မှု တွေနောက် လိုက်ရင်း သူ့ကို ကျွန်တော်တို့ မေ့လျှော့ ထားခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်သွားသွား ဘာလုပ်လုပ် ဒီ စိတ်ဝိဥာဉ်က ကျွန်တော်တို့နဲ့ အမြဲ ရှိနေခဲ့ ပါတယ်။ ဘုရင်ကြီးလို အချိန် မနှောင်းခင်မှာ မဆုံးသေးတဲ့ ဘဝခရီးတွေ အတိုင်း အမြဲ ကိုယ်နဲ့ မခွဲတမ်း သေတစ်ပန် သက်တစ်ဆုံး အတူ ရှိနေတဲ့ စိတ်ဝိဥာဉ်ကို ခွန်အား အပြည့် ရှိအောင် ပြုစု ပျိုးထောင်ပြီး ချစ်ခင် မြတ်နိုးစွာ စောင့်ရှောက်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ကိုယ့် ခန္ဓာကိုယ် ကို ကျန်းမာအောင် ပြုစု စောင့်ရှောက်ပါ။ ဒါမှ ဘဝရဲ့ အနှစ်သာရကို အပြည့်အဝ ခံစားနိုင် ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ဘဝရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ သက်တောင့်သက်သာ ရှိမှု အပေါ် ကျေနပ်ပါ။ ကိုယ့် မိသားစု၊ ဆွေမျိုး အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း တွေဆီက ရတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို လေးစား တန်ဖိုးထားပါ။ ကြင်နာ မြတ်နိုးစွာ တုန့်ပြန် ပြုစု စောင့်ရှောက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ဝိဥာဉ် ကို အဟာရ ပြည့်ဝအောင် ဂရု စိုက်ဖို့ မမေ့လျှော့ ပါနဲ့။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးရဲ့ ဘဝ အရင်းခံ ရေသောက်မြစ် ဖြစ်သလို ဘဝ တစ်သက်လုံး အတွက် စစ်မှန်တဲ့ မိတ်ဆွေကောင်း တစ်ဦးလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောကကြီးက သင့်ကို ဒူးထောက် လဲကျအောင် လုပ်တဲ့ အခါတိုင်း ဘုရားကို ဝတ်ပြု ဆုတောင်းဖို့ အသင့်တော်ဆုံး အခွင့်ရေး ပေးထားတယ် ဆိုတာ သတိရပါ။ဘာသာပြန်သူ - မိုးကုတ်သားမူရင်းကို ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။